डिजाइन सफ्टवेयर योजनाहरु। समीक्षा, चयन, समीक्षा
योजना जो कोहीले कम्तिमा थप वा कम परिष्कृत इलेक्ट्रनिक्स कुरा गरे जो थियो। तर हात तिनीहरूलाई आकर्षित गर्न - यो एक लामो समय, छ बाहेक, कुनै पनि गल्ती भएको workpiece बर्बाद हुनेछ। तसर्थ, यस उद्देश्यका लागि प्रयोग सर्किट डिजाइन लागि विशेष कार्यक्रम। तिनीहरूले के के हुन्? अवसर के प्रदान? पहिलो, केही व्यावसायिक परियोजनाहरू छलफल गरिनेछ, र त्यसपछि नि: शुल्क।
सल्लाहकार ग्राफिक्स सफ्टवेयर को
यो सफल कम्पनी आफ्नो उत्पादन विकास हुन्छ भनी - पैड PowerPCB र अभियान पीसीबी। तिनीहरूलाई धेरै विन्डोज अन्तर्गत वातावरण मा डिजाइन ध्यान को सफलता को योगदान गरे। प्याकेज पैड PowerPCB कार्ड बनाउनको लागि एक अपेक्षाकृत कम लागत र उच्च गुणस्तरीय समाधान प्रदान गर्दछ। त्यसैले, त्यहाँ उच्च आवृत्ति सर्किट बोर्ड लागि सबै आवश्यक कार्यहरु जो autorouter छ। पनि प्याकेजमा posttopologicheskogo predtopologicheskogo र विश्लेषण मोड्युलहरू छन्। जब सीमित नियन्त्रण प्रणाली संग काम यो उपयोगी छ। प्याकेज अभियान पीसीबी थप सिद्ध छ र डिजाइन को क्षेत्र मा सबै भन्दा शक्तिशाली समाधान को एक। प्रणाली AutoActive वातावरण कि खातामा विशेष आवश्यकताहरु र प्राविधिक सीमितता लिएर, तपाईं सिस्टम को निष्ठा विश्लेषण गर्न अनुमति दिन्छ आधारित छ। साथै, यो पिकअप मोडेल सुविधाजनक छ। कार्यक्रम को सर्किट डिजाइन एक गुणस्तर परियोजना सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ लागि यहाँ उपलब्ध छ। यसको उच्च मूल्य - यो केवल एक drawback उल्लेख गर्न सकिन्छ।
ताल बाट सफ्टवेयर
एउटा सजिलो र सस्तो समाधान विद्युतीय सर्किट बनाउन तिनीहरूले ORCAD प्याकेज प्रस्ताव। उहाँले एक प्राथमिकता इनपुट सिस्टम परियोजनाहरू रूपमा मानिन्छ। नयाँ संस्करण synthesize र डिजिटल तर्क सर्किट अनुकरण गर्ने क्षमता थपियो। संपादक यसको विशेष सुविधाहरू द्वारा विशेषता छ प्रत्येक जो तीन अलग अलग विन्यास, छ। परियोजना, तपाईंले तीस तहहरू सम्म बनाउन सक्नुहुन्छ। निर्मित autorouting पनि autoplacement उपलब्ध छैन। अधिक महंगा कामहरूमा पीसीबी डिजाइन स्टुडियो प्रस्तावित। यो एक उच्च गतिको बहु-पत्र सर्किट, जसमा उच्च घनत्व घटक नियुक्ति सिर्जना गर्न सुविधाजनक छ। तपाईं पनि विद्युत अनुकूलता र पूर्व-परीक्षण विकास परियोजना को विश्लेषण पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। तर, हाम्रो वास्तविकता द्वारा निर्देशित, गाह्रो सूचना छैन जहाँ तपाईं विद्युतीय सर्किट सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कम्प्युटर, को लागि सबै भन्दा लोकप्रिय निःशुल्क कार्यक्रम छ।
क्लाउड प्रविधिहरू र वेबमा यो कार्यक्रम आधारित छ। यसलाई इनपुट को एक कार्यात्मक विवरण, ताराहरु विद्युतीय सर्किट, साथै मिश्रित मोड सिमुलेशन छ। र यो सबै संग, तपाईंले आफ्नो ब्राउजरमा काम गर्न सक्छन्। आह हो, विद्युतीय सर्किट सिर्जना लागि कार्यक्रम पूर्ण निःशुल्क छ। (- यसलाई बन्द गर्न वा विपरित) को प्राप्त परिणाम सबै खुला हुन सक्छ। आवश्यक पुस्तकालयमा आयात गर्न सकिन्छ, र ईगल, KiCad, LTspice र ALTIUM देखि टुक्रा सेट रूपमा। साथै, आवश्यक भएमा, प्राप्त परिणाम धेरै स्वरूप निर्यात गर्न सकिन्छ। यसलाई (, albeit सीधा छैन) अन्य सर्किट डिजाइन कार्यक्रम को लागि काम गर्न सक्छन् भनेर दिएको, यो सफ्टवेयर विश्वव्यापी रहेको दाबी राख्नु गर्न सक्नुहुन्छ।
यो सम्पादक द्विपक्षीय को मार्गदर्शन सिर्जना समर्थन मुद्रित सर्किट बोर्ड, पुरुष र योजनाविद्य निष्कर्ष संग भागहरु समावेश गर्न सक्छन् जो। जडान छन् भनेर पैड जोड दिंदै लक्ष्य सूची आयात गर्ने क्षमता, साथै त्यहाँ कार्यान्वयन गरिएको छ। सरल खोजी र इलेक्ट्रनिक घटक खरिद संख्यात्मक कोड संख्यात्मक छन् (सबै होइन हुनत)। यहाँ तपाईं सही क्षेत्रीय मा घटक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं समाप्त परियोजना सिर्जना गरेपछि, त्यो तत्व को अनुमानित लागत भन्नेछु, र अर्डर राख्न मदत। यस मामला मा, चित्र बनाउनको लागि कार्यक्रम पूर्ण रूपमा मुक्त छ। तर यो अमेरिकी स्वयंसेवकहरु एउटा सानो समूह द्वारा विकसित भएको थियो, त्यसैले धेरै बेफाइदा छ। त्यसैले, त्यहाँ घटक को अधिकतम नियुक्ति सिरिलिक वर्ण समर्थित छैनन् र कुनै autorouter छ चयन गर्न कुनै पिंग समारोह छ। सामान्य मा, यो चाँडै उच्च गुणस्तरीय two- वा चार-पत्र विद्युतीय सर्किट को द्रुत सिर्जना साथ विभिन्न उत्पादन समस्या समाधान गर्न डिजाइन गरिएको छ।
तपाईं विद्युत सर्किट डिजाइन को लागि एक राम्रो र निःशुल्क कार्यक्रम आवश्यक छ भने, यहाँ तिनीहरू एक हो। यो प्रत्येक जो एक निश्चित कार्यक्षमता लागि जिम्मेवार छ धेरै मोड्युलहरू, को हुन्छन्। एउटा महत्त्वपूर्ण फाइदा यो घरेलू विकास हो भन्ने तथ्यलाई छ। त्यसैले, यो सफ्टवेयर र रूसी सँगैको जानकारी। योजनाहरू nuances सिर्जना यो सम्झौता धन्यवाद यहाँ सजिलो हुनेछ। को सम्पादन योग्य वस्तुहरु उपलब्ध प्रकाश लागि काम गर्दा। यो नेत्रहीन मामिलामा स्थिति आकलन गर्न अनुमति दिन्छ। उपलब्ध autorouter राम्रो जटिल बहु-पत्र सर्किट बोर्ड, जो मा भागहरु विभिन्न प्रकारका राखिएका छन् सामना गर्न सक्षम। के अनुभवहीन मानिसहरू लागि महत्त्वपूर्ण छ - त्यहाँ एक परियोजना हो भन्ने तथ्यलाई छ, तपाईं त्रुटि पत्ता लगाउने र सुधार मक्खी मा स्थान लिन्छ त, धेरै निरीक्षण सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तिम परिणाम को एक विचार छ, त्यहाँ सिम्युलेटर मा एक निर्माण गरेको छ तीन आयोमी ठाउँ। तर, निष्पक्षता, यो निःशुल्क संस्करण बिट सीमित (रूपमा शुल्क गर्न विरोध) छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। तर पनि यो कार्यक्षमता सुविधाजनक, उच्च-प्रदर्शन काम गर्न सक्षम बनाउँछ।
भुक्तानी भएको छ कि यो पूर्ण सफ्टवेयर प्याकेज र निःशुल्क संस्करण (तिनीहरूले सर्किट द्वारा उत्पन्न आकार मा फरक)। यो तीन मुख्य घटक छ कि तपाईं मानक तत्व प्रयोग विद्युतीय सर्किट आकर्षित गर्न आफ्नै मा रेखाचित्र सिर्जना गर्न र प्रयोगकर्ता मुछिएको बिना tracing पूरा अनुमति समावेश छ। तपाईं बस विद्युतीय सर्किट डिजाइन सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो कार्यक्रम व्यापक कार्यक्षमता मार्फत पर्याप्त लाभ प्रदान गर्नेछ। तर आकार सीमा यो असम्भाव्य जटिल उत्पादनहरु को विकास मा आफ्नो प्रयोग गर्ने बनाउँछ।
यहाँ हामी आफ्नो कम्प्युटर लागि व्यावसायिक र निःशुल्क कार्यक्रम जांच। यसलाई पूर्व फराकिलो कार्यक्षमता छ गर्छन कि उल्लेख गर्नुपर्छ। यो अचम्मको छैन - यी सबै कार्यक्रम डिजाइन गर्न योजनाहरू यसको विकासकर्ताहरू लाभ ल्याउन, पछि त यो पहिलो र विभिन्न नवाचारै हुन्छ।
एक "दरार" र यसको स्थापना को नतिजा के हो
Windows7को लागि सबै भन्दा राम्रो एन्टिभाइरस के हो?
काजाकिस्तान मा पेंशन: डिजाइन, अवकाश उमेर गणना
Bannammao Resort होटल3* (पटाया, थाईल्याण्ड) फोटो र समीक्षा
दबाइ "famotidine": प्रयोग, निर्देशन, वर्णन र समीक्षा लागि सङ्केत गर्छ
मास्को मा नयाँ Frontiers
तुर्कमेनिस्तान को झण्डा: विवरण र मूल्य। तुर्कमेनिस्तान को राष्ट्रपति मानक। रूस मा तुर्कमेनिस्तान को दूतावास